Shiinaha warshad sameynta iyo alaab-qeybiyeyaasha | Donghua
Acrylic wuxuu caan ka noqday muraayadda si loo qaabeeyo sanadihii la soo dhaafay iyadoo sabab macquul ah loo helay.
● Waa mid jajaban oo khafiif ah, kana duwan muraayadda. Astaamahan ayaa ka dhigaya mid loo doorto sawir qaadayaasha la shaqeeya carruurta iyo qoysaska - gaar ahaan carruurta. Ku laalaada loox leh xayndaab ama qolka ciyaarta ayaa ka badbaado badan muraayadda kale, maadaama ay u dhowdahay inay waxyeello u geysato qofna hadday dhacdo.
Intaa waxaa sii dheer, dabeecadda burbursan iyo mid fudud ayaa ka dhigaysa mid aan fiicnayn oo loogu talagalay rarka. Waxaan kugula talineynaa qaabka loo yaqaan 'acrylic frame' oo loogu talagalay bandhigyada farshaxanka wanaagsan maxaa yeelay waa 1/2 miisaanka muraayadda waana mid aan la jabin karin. Fududeynta iyo amni qaadista iyo rarida farshaxanka bandhigyada.
Is Itis waarta. Uma horseedi doonto jirku inuu fooraro waqti ka dib. Markaa waa waxyaabaha la doorbido markii la sudho farshaxan ballaaran iyo kaydinta.
Acrylic saafi ah ayaa ah ikhtiyaarka ugu badan ee loogu talagalay codsiyada maalinlaha ah. Waa tan ugu qaalisan ee loo yaqaan 'acrylic family', oo waxay ku siin doontaa adiga illaa 92% gudbinta iftiinka muuqaal muuqaal ahaan cad.